Kuvele ilihhashi: isithombe, ukuveza izimfihlo. Yini ochwepheshe bekwi ukutadisha abangaziwa ezindizayo izinto?
Kusukela ezikhathini zasendulo, abantu njalo abafuna ukukukholelwa kokuthile okungaphezu kwemvelo. Kuvele abangaziwa ezindizayo into ... izinganekwane abahlukahlukene legends mayelana imihlaba parallel ukusakaza emhlabeni wonke. Ososayensi kube yilolu suku sisambathekile mayelana ubuqiniso kanye ukunemba yalezi ezizathwini. UFOs bekulokhu kuyingxenye ebalulekile la izindaba. Lokho ukuphila alien yaba kuncike ingxoxo emnandi futhi mpikiswano.
Ufo ekuqaleni komlando
Ezikhathini zasendulo, abantu ziyazithanda ukufunda izinkanyezi, usebenzisa izibonakude bakudala ngezinye izikhathi waphawula izenzakalo engavamile esibhakabhakeni. Bona ngenkuthalo wabhala phansi ucwaningo lakhe futhi kamuva wazama sizihlole ukuze uhambe shí ukuqonda yonke. Nokho, ukudlula noma iyiphi enye inkathi Ayaziwa ngokusungula ezizathwini ezifana Ephakathi.
Kusukela ngekhulu lesi-nantathu, i-British kanye Irish bachazwa emibhalweni yakhe ukubonakala "izinto eziyinqaba esibhakabhakeni." Ezinye zazo elicwengisiswe babefa ifomu yezingqimba zomhlaba. Ngakho bashada abangaziwa ezindizayo into. Abaculi wesikhathi ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze bathathe isithombe esicacile kulezi zinkanyezi emangalisayo futhi eyinkimbinkimbi. Ngo ngekhulu nanhlanu, umpendi abanamakhono ngesineke izinto akhazimula esibhakabhakeni emkhathizwe, futhi ngaleyo ndlela wathatha ukudla zomphakathi kucabanga ingxoxo.
Inkathi amafilimu kanye ubufakazi impahla
Kamuva, lapho intuthuko wasondela, izenzakalo ezinjalo ukuze uthwebule ku ifilimu noma ividiyo, kwaba ubufakazi obubaluleke kakhulu futhi obuqand kwenzekani ukunyakaza ukuthi wenziwe abangaziwa ezindizayo into. Isithombe kwakwanele. Ezimweni ezinjalo ziye zaba njalo kanye neziphathimandla kwamanye amazwe athuthukile unqume ikomitjhini, omsebenzi wakhe kuyoba ukuqinisekisa ubuqiniso ubufakazi futhi amaphuzu anikezwe.
Kusukela ngaleso sikhathi, isifundo lezinto abangaziwa ezindizayo isibe ukubukeka esisemthethweni ngaphezulu. Imiphumela yemisebenzi baye ayibanga yize futhi impela ukwazi, ngoba ingxenye enkulu ye izithombe, ekugcineni kwahlaluka ukuthi kuyiqiniso.
Kodwa ezinye izazi bekwi ukutadisha abangaziwa ezindizayo izinto? amaqembu ezifundo aye yabakhanga ososayensi adumile, abangena kamuva wathatha isithakazelo esifundweni kulezi zinkanyezi engavamile. Ngo nineties, ngosizo kungaba qualitatively uhlole amasu ikhompyutha itholakala ngesikhathi izithombe. Into Lwenziwe eduze, zoom kanye nokubuyekeza ngokuningiliziwe.
Ukuzibandakanya lososayensi nonjiniyela ocwaningweni
Phakathi nesifundo, ochwepheshe abaningi usola ukuthi abangaziwa ezindizayo izinto - akuyona izivakashi kuvela emkhathini, kanti nabameleli amabutho umhlaba. Abaningi Izigayo elichumayo ezinkulu olwenziwa oluthathwa ukuthuthukiswa wezempi, ngakho akumangalisi ukuthi Saucers ezindizayo zinjalo enengqondo kakhulu.
Nokho, ososayensi khawuleza ukukuqinisekisa ukuthi lokhu limane ukuqagela futhi yini ephathelene nesihloko, akufanele athathwe "ubuso value" noma ngokwezwi nezwi. Naphezu kweqiniso lokuthi isifundo zalesi simo iye ungenisa ochwepheshe abaningi, kuhlanganise nososayensi futhi onjiniyela, intuthuko ukhonkolo eqinisweni ningagcini, futhi kwakungekho muntu oyiqondayo imfihlakalo UFOs. Ongashiwongo izinto flying ngihlalé ezimboziwe ungqimba imfihlakalo futhi imfihlakalo.
UFOs: ukudalulwa izimfihlo
Kodwa manje inkathi intuthuko kwezobuchwepheshe, futhi abantu base bekhuluma mayelana indiza emkhathini. Ngaleso sikhathi, yonke onokucwaningwa kuphela esebenzisa isibonakude, okuyinto enganikanga amathuba amaningi, futhi ubuyekeze. Ayemaningi siqiniseke ngokuphelele ukuthi andize isikhala kungaba unomphela ukuphendula umbuzo mayelana engaziwa ezindizayo izinto manje bese uvele esibhakabhakeni. Lokho kufika usuku kwesibhamu. Asikwazi ukuthi kwakungadingekile esidumazayo, ngoba isikhala ngokwayo kuyisimangaliso sokudalwa, idayimane kumangaza futhi angenamkhawulo, okuyinto kwaba lucky ngokwanele ukuba sibheke umuntu.
Olufufusayo indiza emkhathini
Nokho, akukho database ne aliens noma fantasy efana wayengekho lapho. Naphezu kwakho konke lokhu Empeleni, ososayensi American University of Colorado ababebuthene iqembu lochwepheshe amathathu nesikhombisa, eyayizoba ahlaziye ngokucophelela konke lokhu "hypothesis alien". Kwaba umsebenzi omkhulu ngempela, ngoba ngaleso sikhathi archive babengaba zinkulungwane nambili ezahlukene amaqiniso, okubonwayo kanye nobufakazi. Naphezu ndathane yokwaziswa futhi ukufinyelela evulekile izinto eziningi imfihlo, isintu waphinda kuhlulekile.
Ufo hhayi namaqiniso angokwesayensi
Phakathi ucinge abangaziwa ezindizayo into isidlulile, futhi abaningi bashiya izikhundla zabo ukuba umqondo wokuthi lena nje kohliso, okuyinto eside kakhulu wahlala ekucabangeni kwabo. Abanye - lalihlala ukuba ngomhawu ukuvikela ukuba khona nezakhamuzi umthelela wabo ngqo empilweni sonke isintu. Kungakhathaliseki ukuthi laliyini, oluphelele incazelo yesayensi amaqiniso ekhona kwaba engakwazanga ukuholela. Ezingeni olusemthethweni, i abangaziwa ezindizayo into - into ongakaphathelani ne imiqondo evamile yasemhlabeni futhi kuvela futhi iphele esibhakabhakeni.
UFO - akukho kuka kokuqagela?
Ngo ukungakhethi, kufanele kuphawulwe ukuthi inani elikhulu lezinto ukuthi ubukade ezingaziwa, manje ezikhonjwe futhi baqinisekisa ezingeni esemthethweni njengoba labo abangekho alien.
Yini engase ishiwo yezinganekwane eziningi tindzaba lacocelwe tona ofakazi bokuzibonela Kusolakala? abantu abanengqondo eziningi zikholelwa ukuthi kufanele luphathwe ezinye ukungabaza. Namuhla, emazweni amaningi uqhubeke observation kwabo izinto flying ethembeni ekugcineni ukucacisa isimo. Nokho, Ziya zanda Imininingwane ukuthi iningi abangaziwa ezindizayo leti abameleli Iqiniso izakhiwo eliwumhlaba ehlukahlukene yezempi.
Udaba olusha Ufo zasolwandle
Akubanga isithakazelo ngaphansi kukhona okuthiwa "amaQuaker" - ulwandle abangaziwa ezindizayo izinto. It kuvela ukuthi izinto ezingaziwa phezulu hhayi kuphela emoyeni kodwa usike ekujuleni kolwandle. Abanye bakholelwa ukuthi kuwuhlobo khona kwesizwe sakwa-kwamanzi, abanye - kumane ezingaziwa izinto ngaphansi kwamanzi. Abaningi bakholelwa lezi zenzakalo akuzona ngaphezu kuwukuzikhohlisa umcabango othile ogulayo. Ufo futhi "amaQuaker" - kungcono amaqiniso ezingaqinisekisiwe yesayensi umbono wokuthi iningi zisekelwe kuphela kofakazi bokuzibonela.
Themba ulwazi olufana noma cha - lokhu kuyinto ilungelo lomuntu ngamunye lokuzikhethela ngamunye. Naphezu inani elikhulu nemibono engqubuzanayo, imphendvulo yekugcina yombuzo akekho anginike.
Sekungamashumi eminyaka ososayensi nonjiniyela baye balwisana ukuxazulula le puzzle ezinzima, kodwa ngisho andize isikhala wayengakwazi ithe i. Minyaka yonke kukhona izinganekwane entsha ahlukahlukene abangaziwa ezindizayo izinto, "amaQuaker", njll, kodwa kubalulekile ukuba angakholelwa ulwazi uphuma ngaphandle.
Alcobaça Monastery: uhambo ePortugal
Sochi isekisi umlando namaqiniso wesimanje
Elevator akusebenzi: ukuxazulula inkinga, kufanele ziye kuphi futhi izincomo
Indlela ukucacisa igolide
Sundae - ukukhanya kwemizwelo ehlobo
Sergey Solnechnikov - Hero yeRussia. Biography bese isizakala ngokulutheka kwabo kwakukhona umphathi Ibutho
Nissan Terrano 2 - imigwaqo akudingekile, izindawo ngokwanele